အခမဲ့ Online ကနေ All in one Converter လာပါပြီ :P Video,Mp3 သီချင်းတွေကို ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုပြောင်းချင်တာလဲ ? ~ ITmanHOME
17:34 FormatFactory Converter, နည်းပညာ No comments
အခမဲ့ Online ကနေ All in one Converter လာပါပြီ :P Video,Mp3 သီချင်းတွေကို ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုပြောင်းချင်တာလဲ ?
အခမဲ့ Online ကနေ All in one converter လာပါပြီ
ဘလော့မိတ်ဆွေအားလုံး ကြိုက်ကြမယ့်Online ကနေ အခမဲ့ All-in-one,Converterလေးလာပါပြီ။ အစုံပါဗျာ kp-3 မိသားစုက ဘယ်တော့မှSoftware မသုံးပါဘူး :P ၊Online ကနေဘဲConvert လုပ်နေမြဲပါ။ ဒါပေမယ့်Kp-3လိုConnectionမျိုးရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်၊ဟီး.....
Video,သီချင်းတွေကို ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုပြောင်းချင်တာလဲ အားလုံးရှိပါတယ်။sorryနော်kp-3ကတော့သုံးတာကြာပါပြီ တင်ဖို့သတိမရ လိုက်လို့ပါ၊ဘလော့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျှက်
ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေအားလုံးကို အစဉ်မြဲချစ်ခင် လေးစားလျှက် kp3မိသားစု